Blockchain News 26 Janoary 2018 - Blockchain News
Janoary 26, 2018 Admin
Blockchain News 26 Janoary 2018
BitGo hahazo matoky tanteraka voafehy ireo orinasa maherin'ny $ 12b amin'ny fananana
BitGo, ny mpitarika ao amin'ny fiarovana nomerika vola vahaolana ho an'ny rafitra mpampiasa vola, nanambara fa efa niditra teo an-raikitra fifanarahana mba hahazo Fanjakana Trust Company, ny South Dakota – matoky tanteraka voafehy ireo orinasa maherin'ny $12 lavitrisa amin'ny fananana. Ny raharaham-barotra no mbola iharan'ny fepetra fanao fanakatonana sy ny fitsipika fankatoavana.
"Global tsena ara-bola no naniry ho farany-to-end fanatitra vahaolana na ny teknolojia nomerika mba hahazoana vola ary koa ny ara-dalàna sy ny fanajana-maso ilaina mampiditra an-mahazatra Portfolios ara-bola"
Fanjakana Trust mahafeno fepetra rehetra azo ampiharina ao anatiny ny hetra Code 408 mba ho mahay mpitahiry araka ny voafaritra ao amin'ny Fampiasam-bola Mpanorohevitra Act ny 1940. Ny tolotra ponja natolotry ny fitokisana orinasa, miaraka BitGo ny fiarovana ny fiarovana nomerika vola rindrambaiko, hanao ny mitambatra ny orinasa manontolo ihany no stack, amin'ny ambaratonga mpamatsy ny onsite sy anaty aterineto ho fiarovana ny fampiasam-bola nomerika vola natao ny rafitra mpampiasa vola.
“BitGo sy ny Fanjakana no fananganana vokatra ho amin'ny ho avy – manambady ny teknolojia vaovao amin'ny fiarovana sy ny fanaraha-maso mpampiasa vola rehetra mitaky.”
Kazakhstana fitsapana fifamoivoizana handoa onitra amin'ny Bitcoin
I Kazakhstan no manao izany azo atao ny mandoa onitra amin'ny cryptocurrency fifamoivoizana. Ny fampiharana finday sy ny asa fanompoana OKauto.kz dia efa notsapaina soa aman-tsara ny iray amin'ireo mpamorona ny fangatahana – Ali Shaykhislam. Na izany aza, ny mpanoratra ny fanompoana Antitrantero fa ny asa vaovao dia mbola mihazakazaka any amin'ilay fanadinana fomba.
Ny mpamorona ny nahatsapa ny mety handoa lamandy governemanta noho ny fanitsakitsahana ny fifamoivoizana fitsipika ao amin'ny cryptocurrency ny bitcoin.
Izany no rindrambaiko maimaim-poana, izay manome fanamarinana ny asa fanompoana sy fampahatsiahivana ny lamandy namoaka, ankoatry ny zavatra hafa.
Tsara ny manamarika fa tsy misy toerana ho an'ny cryptocurrencies ofisialy any Kazakhstan, ka tsy heverina ho vola na fitaovana ara-bola.
Volavolan-dalàna Rosiana cryptocurrency nanolo-kevitra
Ny Minisitry ny Fitantanam-bola Rosiana namoaka volavolan-dalàna “Ao amin'ny Digital Financial Lafin-javatra hafa”, izay natao ho ara-dalàna any Rosia cryptocurrencies.
Ny Minisitry ny Fitantanam-bola dia manondro ny fananan'ny nomerika ara-bola toy ny “fananana in elektronika teny, noforonina mampiasa encryption (cryptographic) dia midika hoe.”
Afaka mifanakalo famantarana ho an'ny hafa, na robla cryptocurrency manokana raha tsy amin'ny alalan'ny fifanakalozana – “fifanakalozana mpandraharaha ara-bola ny fananan'ny nomerika”.
Fikambanana ara-dalàna ihany no voarakitra ao Rosia, ary mitandrina ny lalàna No. 39-FZ “Eo amin'ny tsena Fiarovana” na Tsia. 325-FZ “On voalamina po” Mety ho lasa toy izany mpandraharaha.
Ny fomba fanokafana kaonty sy ny fihazonana dia tokony ho napetraky ny Banky Foibe.
Ny regulator Te hividy afa-tsy ny famantarana ny orinasa izay mampiasa ny manangona vola ho an'ny robla, Nampitandrina ny Minisitry ny Fitantanam-bola.
Ny fanompoana dia mino fa tsy misy azo atao ny mandrara ny mahazatra fividianana ny cryptocurrency, satria raha tsy izany dia tsy ara-dalàna raharaha sitrapony “hetsika” izany tsena.
Ary amin'ny taratasy misy ny famaritana ny marani-tsaina sy ny fifanarahana fitrandrahana, izay heverina ho asa ho an'ny fandraisana ny famoronana na ny fankatoavana ny cryptocurrency ho takalon'ny onitra. Inona no takin'ny hetra amin'ny asa ny mpitrandraka, tsy mazava.
Raha ny tahirin-kevitra mandalo vakiteny telo ao amin'ny Duma-panjakana, ary koa mandray ny fankatoavan'ny Filan-kevitry ny Federasiona sy ny fanaovan-tsonia ny filoham-pirenena Rosiana, izany dia ampiharina 90 andro taorian'ny ofisialy ny boky. Ny volavolan-dalàna dia azo ahitsy nandritra ny adihevitra tao amin'ny parlemanta.
Previous Post:Ny mpahay matematika kajy ny vidin-bitcoin for 2018
Next Post:Chainalysis – ny orinasa izay nandrava ny anarana Bitcoin